Myanmar soldiers from the 77th light infantry division walk alongastreet duringaprotest against the military coup in Yangon, Myanmar, February 28, 2021. Picture taken February 28, 2021. REUTERS/Stringer
မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း စစ်အာဏာသိမ်း ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမူတွေကို၊ စစ်တပ်က သေကျေစေတဲ့အထိ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတာကြောင့်၊ အများသူငှာ ယူကြုံးမရ၊ စိတ်ဖိစီးမူဒဏ်တွေခံစားနေရပြီလို့ စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။
စစ်တပ်အနေနဲ့ မြို့ တွေပေါ်က ဆန္ဒပြသူတွေကို စစ်မြေပြင်မှာလို ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းနေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ၊ လူတွေအသတ်ခံ၊ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံနေရတာတွေကို၊ အများသူငှာ ကိုယ်တွေ့ (သို့မဟုတ်)၊ သူငယ်ချင်းမိတ်တွေဆီက တစ်ဆင့်နဲ့၊ သတင်းမီဒီယာ ဖန်သားပြင်တွေမှာ တွေ့နေရကာ၊ စိတ်ဖိစီးမူဒဏ်ရာတွေကို နိုင်ငံတဝှမ်းပြည်သူအများ ခံစားနေရပါတယ်။ ဒီ့အပေါ် ပြည်သူအများအနေနဲ့ ခံယူထားချက်အရ လက်မခံနိုင်တာ၊ ခံစားချက်တွေအရ မကျေနပ်တာတွေ မျိုးစုံခံစားရပြီး၊ စိတ်ဖိစီးမူတွေ ကြုံလာနေရပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမူရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ အိပ်မပျော်တာ၊ ဝမ်းနည်းတာ၊ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်တာ၊ တခါတရံမှာ စိတ်တိုတာတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခံစားနေကြရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္တာကိုယ်မှာ ဖြစ်လာတဲ့ မစားချင်၊ မသောက်ချင်တာ၊ အလုပ်မလုပ်ချင် မကိုင်ချင်တာစတဲ့ စိတ်ဖိစီးမူလက္ခဏာတွေပါ ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်။
အခုလို ပြင်းထန်တဲ့ အကြမ်းဖက်မူတွေအပေါ် ယူကြုံးမရဖြစ်ရချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမူလက္ခဏာတွေ ကြုံရတာက ပုံမှန်တုံ့ပြန်မူတွေ ဖြစ်ပေမယ့်၊ ရှေ့ မှာ အချိန်ကာလတစ်ခု ဆက်ကြုံရမှာ စိုးရိမ်ရချိန်မှာ၊ စိတ်နဲ့ကိုယ် ကျန်းမာရေးပါ မထိခိုက်အောင်တော့ သတိပြုကာကွယ်နိုင်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ တစ်ဦးချင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် မတူညီတဲ့ ခံနိုင်ရည်ရှိမူအပေါ် သိရှိနားလည်ထားပြီး၊ ဒီခံနိုင်ရည်ရှိမူ အတိုင်းအတာထက် မကျော်လွန်သွားစေဖို့ သတိပြု ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ အိပ်ရေးအပျက်မခံဖို့ ပထမဆုံး အရေးကြီးပါတယ်၊ အကြောင်းက အိပ်ရေးပျက်တာများလာ ကြာလာလျှင်၊ စိတ်ပိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားတွေ ကျလာပြီး အာရုံမစိုက်နိုင်တော့ဘဲ၊ စိတ်ဖိစီးမူဒဏ်ကို ဆက်မခံနိုင်တော့လို့ပါ။ ဒါကြောင့် အခုလိုအချိန်မှာ ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အဆင့် အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ဖို့ ပိုအရေးကြီးလာပါတယ်။ နောက်အရေးကြီးတာကတော့ ခန္တာကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း၊ ပုံမှန်အစားအသောက် မပျက်စေဖို့နဲ့ ပုံမှန်အားကစား လူပ်ရှားတာတွေ မထိခိုက်စေဖို့ပါ၊ အကြောင်းက ကိုယ်ကျန်းမာရေး ထိခိုက်လာလျှင် ဆက်ကြုံရလာနိုင်တဲ့၊ စိတ်ဖိစီးမူဒဏ် ပိုခံရလွယ်ပြီး၊ စိတ်ရောကိုယ်ပါ လုံးခြာလည် ထိခိုက်သွားနိုင်လို့ပါ။
ဒါ့အပြင် အကြမ်းဖက်မူကြောင့် သေကျေထိခိုက်ခံစားကြရတဲ့ သတင်းတွေကို၊ လိုသလောက်သာ အချိန်ကာလတစ်ခုကြည့်ပြီး၊ တစ်နေ့လုံး တစ်ချိန်လုံး ဖန်သားပြင်ပေါ် အမြဲကြည့်မနေဖို့ လိုပါတယ်။ အကြောင်းက အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ မှန်တာရော၊ မှားနိုင်တာပါရောနေတဲ့ Psy-War စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆင်ရေး တွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်၊ ခံစားချက်တွေ ပိုပြင်းထန်လာပြီး ခံနိုင်ရည်ဘောင် ကျော်သွားကာ၊ စိတ်ဖိစီးမူပိုများလာမှာ စိုးရိမ်ရလို့ပါ။ ဒီနေရာမှာ မိမိတစ်ဦးတည်း သီးသန့်နေပြီး ကြိတ်ခံစားနေမဲ့အစား၊ နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်း မိတ်တွေတွေနဲ့အတူ အချင်းချင်း ပြောပြမျှဝေခံစားခြင်းဖြင့်လည်း စိတ်သက်သာမူ ရစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အနားယူဖို့လည်း လိုပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် အလုပ်မလုပ်ချင်လောက်အောင် ခံနိုင်ရည်ကို ကျော်လာပါကလည်း၊ ခေတ္တနားပြီးမှသာ၊ မိမိလုပ်စရာရှိတာတွေ ပြန်ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘာသာရေးနဲ့ အခြားဖြေလျော့စေနိုင်တဲ့ နည်းတွေနဲ့လည်း အချိန်ပေး ဖြေလျော့ယူသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မလုပ်သင့်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးကတော့၊ အရက်နဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေနဲ့ ဖြေဖျောက်တာမျိုး မလုပ်ဖို့ပါ၊ အကြောင်းက ခေတ္တမေ့လျော့ပြီး ခဏတာသက်သာနိုင်ပေမယ့်၊ နောက်ပိုင်းမှာ ခံစားချက်တွေ ပိုဆိုးစေပြီး၊ ရေရှည်အတွက် မကောင်းနိုင်လို့ပါ။ ဒါ့အပြင် ခံစားချက်တွေ ပြင်းထန်လာလျှင်လည်း အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါက အတင်းထိန်းမထားသင့်ပါဘူး။ ဥပမာ ငိုချင်လျှင် အတင်းမထိန်းထားဘဲ ငိုချတာမျိုး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက် ဒေါသထွက်နိုင်တာအတွက်လည်း၊ အတင်းမထိန်းချုပ်ထားဘဲ သတိနဲ့ယှဉ်ပြီး၊ ထွက်သင့်တာနဲ့ မထွက်သင့်တာခွဲခြားကာ၊ အရေးကြီးတာက အကြမ်းနည်းနဲ့ ဖောက်ခွဲပစ်မိတာမျိုး မဖြစ်မိအောင် အထူးသတိပြု ကာကွယ်သင့်တာပါ။ လက်ရှိ လူထုဆန္ဒပြ လူပ်ရှားမူတွေထဲမှာ၊ ဒီလိုဒေါသမျိုးတွေနဲ့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း အရင်တုံးကလို မဖြစ်အောင်၊ အချင်းချင်းဝိုင်းထိန်းပေးကြတဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းကို ဆက်ထိန်းသွားသင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ အကောင်းဖက်ကို မျှော်လင့်ချက်ထားပြီး၊ ဆက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်လျှင်တော့၊ လက်ရှိ အခက်အခဲ အခိုက်အတန့်ကို ကျော်လွှားသွားနိုင်ဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး၊ အခုအကြမ်းဖက်မူတွေ ခံနေရချိန်၊ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် စိတ်ပိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်း၊ လုံခြုံမူအပိုင်း အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ဝိုင်းကူပံ့ပိုးပေးတာ၊ အခုလို ကူဖို့ကြိုပြောထားတာမျိုးနဲ့ အားလုံးအတွက် စိတ်လုံခြုံမူစေနိုင်ပြီး၊ ဒီ ယူကြုံးမရဖြစ်ရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမူတွေကို အတူတူဝိုင်းလျော့ချ၊ ကျော်လွှားသွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ ကိုဝင်းမင်း က ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) စိတ်ကျန်းမာ၊ပညာဌာန ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှုး ဒေါက်တာတင်ဦး ကို ဆက်သွယ်မေးထားပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံတဝှမျး စဈအာဏာသိမျး ဆနျ့ကငျြဆန်ဒပွမူတှကေို၊ စဈတပျက သကေစြေတေဲ့အထိ အကွမျးဖကျ ပဈခတျဖွိုခှငျးတာကွောငျ့၊ အမြားသူငှာ ယူကွုံးမရ၊ စိတျဖိစီးမူဒဏျတှခေံစားနရေပွီလို့ စိတျကနျြးမာရေးပညာရှငျတှကေ ဆိုပါတယျ။
စဈတပျအနနေဲ့ မွို့တှပေျေါက ဆန်ဒပွသူတှကေို စဈမွပွေငျမှာလို ပဈခတျဖွိုခှငျးနတေဲ့ မွငျကှငျးတှေ၊ လူတှအေသတျခံ၊ ရိုကျနှကျဖမျးဆီးခံနရေတာတှကေို၊ အမြားသူငှာ ကိုယျတှေ့ (သို့မဟုတျ)၊ သူငယျခငျြးမိတျတှဆေီက တဈဆငျ့နဲ့၊ သတငျးမီဒီယာ ဖနျသားပွငျတှမှော တှနေ့ရေကာ၊ စိတျဖိစီးမူဒဏျရာတှကေို နိုငျငံတဝှမျးပွညျသူအမြား ခံစားနရေပါတယျ။ ဒီ့အပျေါ ပွညျသူအမြားအနနေဲ့ ခံယူထားခကျြအရ လကျမခံနိုငျတာ၊ ခံစားခကျြတှအေရ မကနြေပျတာတှေ မြိုးစုံခံစားရပွီး၊ စိတျဖိစီးမူတှေ ကွုံလာနရေပါတယျ။ ဒီစိတျဖိစီးမူရဲ့ လက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့ အိပျမပြျောတာ၊ ဝမျးနညျးတာ၊ မခံမရပျနိုငျဖွဈတာ၊ တခါတရံမှာ စိတျတိုတာတှေ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ခံစားနကွေရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ခန်တာကိုယျမှာ ဖွဈလာတဲ့ မစားခငျြ၊ မသောကျခငျြတာ၊ အလုပျမလုပျခငျြ မကိုငျခငျြတာစတဲ့ စိတျဖိစီးမူလက်ခဏာတှပေါ ကွုံလာရနိုငျပါတယျ။
အခုလို ပွငျးထနျတဲ့ အကွမျးဖကျမူတှအေပျေါ ယူကွုံးမရဖွဈရခြိနျမှာ စိတျဖိစီးမူလက်ခဏာတှေ ကွုံရတာက ပုံမှနျတုံ့ပွနျမူတှေ ဖွဈပမေယျ့၊ ရှမှေ့ာ အခြိနျကာလတဈခု ဆကျကွုံရမှာ စိုးရိမျရခြိနျမှာ၊ စိတျနဲ့ကိုယျ ကနျြးမာရေးပါ မထိခိုကျအောငျတော့ သတိပွုကာကှယျနိုငျတာတှေ ရှိပါတယျ။ အဓိကကတော့ တဈဦးခငျြး ကိုယျ့ကိုကိုယျ မတူညီတဲ့ ခံနိုငျရညျရှိမူအပျေါ သိရှိနားလညျထားပွီး၊ ဒီခံနိုငျရညျရှိမူ အတိုငျးအတာထကျ မကြျောလှနျသှားစဖေို့ သတိပွု ဂရုစိုကျသငျ့ပါတယျ။ အဓိကကတော့ အိပျရေးအပကျြမခံဖို့ ပထမဆုံး အရေးကွီးပါတယျ၊ အကွောငျးက အိပျရေးပကျြတာမြားလာ ကွာလာလြှငျ၊ စိတျပိုငျး၊ ကိုယျပိုငျစှမျးအားတှေ ကလြာပွီး အာရုံမစိုကျနိုငျတော့ဘဲ၊ စိတျဖိစီးမူဒဏျကို ဆကျမခံနိုငျတော့လို့ပါ။ ဒါကွောငျ့ အခုလိုအခြိနျမှာ ခံနိုငျရညျရှိတဲ့အဆငျ့ အိပျရေးဝအောငျ အိပျဖို့ ပိုအရေးကွီးလာပါတယျ။ နောကျအရေးကွီးတာကတော့ ခန်တာကိုယျ ကနျြးမာရေးအတှကျလညျး၊ ပုံမှနျအစားအသောကျ မပကျြစဖေို့နဲ့ ပုံမှနျအားကစား လူပျရှားတာတှေ မထိခိုကျစဖေို့ပါ၊ အကွောငျးက ကိုယျကနျြးမာရေး ထိခိုကျလာလြှငျ ဆကျကွုံရလာနိုငျတဲ့၊ စိတျဖိစီးမူဒဏျ ပိုခံရလှယျပွီး၊ စိတျရောကိုယျပါ လုံးခွာလညျ ထိခိုကျသှားနိုငျလို့ပါ။
ဒါ့အပွငျ အကွမျးဖကျမူကွောငျ့ သကေထြေိခိုကျခံစားကွရတဲ့ သတငျးတှကေို၊ လိုသလောကျသာ အခြိနျကာလတဈခုကွညျ့ပွီး၊ တဈနလေုံ့း တဈခြိနျလုံး ဖနျသားပွငျပျေါ အမွဲကွညျ့မနဖေို့ လိုပါတယျ။ အကွောငျးက အခုလိုအခြိနျမြိုးမှာ မှနျတာရော၊ မှားနိုငျတာပါရောနတေဲ့ Psy-War စိတျပိုငျးဆိုငျရာ စဈဆငျရေး တှရှေိလာနိုငျတာကွောငျ့၊ ခံစားခကျြတှေ ပိုပွငျးထနျလာပွီး ခံနိုငျရညျဘောငျ ကြျောသှားကာ၊ စိတျဖိစီးမူပိုမြားလာမှာ စိုးရိမျရလို့ပါ။ ဒီနရောမှာ မိမိတဈဦးတညျး သီးသနျ့နပွေီး ကွိတျခံစားနမေဲ့အစား၊ နီးစပျရာ သူငယျခငျြး မိတျတှတှေနေဲ့အတူ အခငျြးခငျြး ပွောပွမြှဝခေံစားခွငျးဖွငျ့လညျး စိတျသကျသာမူ ရစနေိုငျပါတယျ။ နောကျတဈခုက အနားယူဖို့လညျး လိုပါတယျ၊ အထူးသဖွငျ့ အလုပျမလုပျခငျြလောကျအောငျ ခံနိုငျရညျကို ကြျောလာပါကလညျး၊ ခတ်ေတနားပွီးမှသာ၊ မိမိလုပျစရာရှိတာတှေ ပွနျဆကျလုပျသငျ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဘာသာရေးနဲ့ အခွားဖွလြေော့စနေိုငျတဲ့ နညျးတှနေဲ့လညျး အခြိနျပေး ဖွလြေော့ယူသငျ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ မလုပျသငျ့တာတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ပထမဆုံးကတော့၊ အရကျနဲ့ မူးယဈဆေးတှနေဲ့ ဖွဖြေောကျတာမြိုး မလုပျဖို့ပါ၊ အကွောငျးက ခတ်ေတမလြေ့ော့ပွီး ခဏတာသကျသာနိုငျပမေယျ့၊ နောကျပိုငျးမှာ ခံစားခကျြတှေ ပိုဆိုးစပွေီး၊ ရရှေညျအတှကျ မကောငျးနိုငျလို့ပါ။ ဒါ့အပွငျ ခံစားခကျြတှေ ပွငျးထနျလာလြှငျလညျး အန်တရာယျမရှိနိုငျပါက အတငျးထိနျးမထားသငျ့ပါဘူး။ ဥပမာ ငိုခငျြလြှငျ အတငျးမထိနျးထားဘဲ ငိုခတြာမြိုး လုပျနိုငျပါတယျ။ နောကျ ဒေါသထှကျနိုငျတာအတှကျလညျး၊ အတငျးမထိနျးခြုပျထားဘဲ သတိနဲ့ယှဉျပွီး၊ ထှကျသငျ့တာနဲ့ မထှကျသငျ့တာခှဲခွားကာ၊ အရေးကွီးတာက အကွမျးနညျးနဲ့ ဖောကျခှဲပဈမိတာမြိုး မဖွဈမိအောငျ အထူးသတိပွု ကာကှယျသငျ့တာပါ။ လကျရှိ လူထုဆန်ဒပွ လူပျရှားမူတှထေဲမှာ၊ ဒီလိုဒေါသမြိုးတှနေဲ့ ကွမျးကွမျးတမျးတမျး အရငျတုံးကလို မဖွဈအောငျ၊ အခငျြးခငျြးဝိုငျးထိနျးပေးကွတဲ့ အလအေ့ကငျြ့ကောငျးကို ဆကျထိနျးသှားသငျ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဖွဈလာနိုငျခွရှေိတဲ့ အကောငျးဖကျကို မြှျောလငျ့ခကျြထားပွီး၊ ဆကျဆောငျရှကျသှားနိုငျလြှငျတော့၊ လကျရှိ အခကျအခဲ အခိုကျအတနျ့ကို ကြျောလှားသှားနိုငျဖို့ အထောကျအကူ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ နောကျပွီး၊ အခုအကွမျးဖကျမူတှေ ခံနရေခြိနျ၊ အခငျြးခငျြး အပွနျအလှနျ စိတျပိုငျး၊ ကိုယျပိုငျး၊ လုံခွုံမူအပိုငျး အခွခေံလိုအပျခကျြတှကေို ဝိုငျးကူပံ့ပိုးပေးတာ၊ အခုလို ကူဖို့ကွိုပွောထားတာမြိုးနဲ့ အားလုံးအတှကျ စိတျလုံခွုံမူစနေိုငျပွီး၊ ဒီ ယူကွုံးမရဖွဈရတဲ့ စိတျဖိစီးမူတှကေို အတူတူဝိုငျးလြော့ခြ၊ ကြျောလှားသှားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီအကွောငျး ပိုမိုသိရှိနားလညျနိုငျဖို့ ကိုဝငျးမငျး က ဆေးတက်ကသိုလျ (၁) စိတျကနျြးမာ၊ပညာဌာန ပါမောက်ခ၊ ဌာနမှုး ဒေါကျတာတငျဦး ကို ဆကျသှယျမေးထားပါတယျ။
စစ်အာဏာသိမ်း ဆန္ဒပြမူတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ကာကွယ်ရေး
ကိုဗစ်ကာလ စစ်အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်မူတွင်း ကာကွယ်ရေး